ने’तृत्वलाई झ’ड्का रमेश खरेलले ‘हाम्रो नेपाल सु’शासन अभियान’ शुरु गरे! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ने’तृत्वलाई झ’ड्का रमेश खरेलले ‘हाम्रो नेपाल सु’शासन अभियान’ शुरु गरे!
नेपाल प्र’हरीका भुतपूर्व डीआईजी रमेश खरेलले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान औपचारीक रुपमा घो’षणा गरेका छन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’ को बिहीबार शुभारम्भ गरेका हुन् । बिहीबार घोषणा कार्यक्रममा देशमा भ्र’ष्टाचारजन्य विकृति र विसंगति निरन्तर बढिरहेकाले आफूहरुले वाध्य भएर अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको खरेल सहितका अरु अभियान्ताहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।
अभियानले भ्र’ष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवर्द्धन, राजनैतिक शुद्धिकरणलगायत विभिन्न ८ वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्यहरुको पूर्तिका लागि ७ वटा कार्यक्रम र गतिविधिको घोषणा गरिएको छ । अभियानको अवधारणापत्र अनुसार सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि देशब्यापीरुपमा नागरिक खब’रदारी कार्यक्रमहरु गरिनेछ ।
ती कार्यक्रममा भ्र’ष्टाचारी संस्कारको वि’रोध गर्ने मात्र नभएर भ्र’ष्टाचारीको पहिचान गरी उनीहरुको सम्पत्तिको सूचना संकलन गर्ने र कारवाहीको लागि दवाव दिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । अभियानपत्रमा मूर्तरुपले कुनै राजनीतिक ए’जेन्डा स’मावेश गरिएको छैन । तर, घुमाउरो तरिकाले केही विषयहरु समेटिएको छ । ‘नेपाल र नेपालीको हितमा नदेखिएका संवैधानिक प्राबधान र व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने’ अभियानको निस्कर्ष छ ।
‘नेपाली नागरिकहरुको प्रत्यक्ष र स्पष्ट अ’भिमतबिना थोपरिएका कतिपय संवैधानिक व्यवस्था एवं विषयहरुमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारमा संशोधन र जनमतको प्रक्रियामार्फत समाधान र संवोधनका उपायहरुको खोजीका लागि विज्ञ, स’रोकारवाला र देशप्रेमी नागरिकहरुबीच छलफल गरी जनमत तयार गर्ने’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ । खर्चिलो र प्रत्यूत्पादक देखिएको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई अभियानले आफ्नो ए’जेन्डामा समेटेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कानून अबिलम्ब निर्माण हुनुपर्ने अभियानको माग छ ।
सं’वैधानिक अं’गहरुबीच शक्ति सन्तुलनको अभ्यास हुनुपर्ने, संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डा तथा राजनीतिक आस्था र नाताबादको आधारमा नियुक्ती ग’रिने प’रिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने, प्रभाव र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न रोक लगाइनुपर्ने पनि अभियानका ए’जेन्डा छन् । अभियान सञ्चालनका लागि पाँच जनाको केन्द्रीय तदर्थ कार्यकारी परिषद निर्माण गरिएको छ । खरेलको संयोजकत्वमा रहेको परिषदमा देवेन्द्र प्रसाद सिटौला, डा. नारायण घिमिरे, राजकुमार यादव र रोशन श्रेष्ठ रहेका छन् ।
Previous एक सा’माजिक अ’भियन्ताको बधाई पत्र छुवाछूत गर्नेलाई यसरी नै खोरमा राख्नु हामी साथ दिने छौ।
Next स’रस्वती मा’ताको दर्शन गर्दै आज – ३० फाल्गुण २०७६ शुक्रवार को रा’शिफल हरौं ।ॐॐ